Mooshinka ka dhanka ah DP World oo loo gudbinayo baarlamanka PUNTLAND - Caasimada Online
Home Warar Mooshinka ka dhanka ah DP World oo loo gudbinayo baarlamanka PUNTLAND
Mooshinka ka dhanka ah DP World oo loo gudbinayo baarlamanka PUNTLAND
Garoowe (Caasimada Online) – Qaar kamid ah xubnaha Baarlamaanka maamul Goboleedka Puntland ayaa wado olole mooshin looga keenayo Heshiiskii Shirkadda DP World iyo Xukuumadda ee ku saabsan Dekadda Boosaaso.
Sida ay illo wareedyo lagu kalsoonaan karo sheegayaan in ka badan 41 mudane ayaa saxiixay mooshinka la doonayo in lagu baabi’iyo heshiiska Puntland iyo Shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee DP World.
Maanta ayaa la filayaa in mooshinkaan oo ay saxiixeyn 41 Xildhibaan loo gudbiyo guddoonka Golaha Baarlamaanka Puntland, iyada oo la sheegayo in ka hortegida mooshinkaan aysan waxba ka qaban karin Xukuumadda & Guddoonka Golaha Wakiilada Puntland intaba.
Lama xaqiijin karo haddii uu mooshinkaan wax ka og yahay madaxweynaha Puntland iyo haddii uusan raali ka aheyn, mana muuqato dadaalo uu Deni ku doonayo in looga hortago mooshinka.
Sanadkii 2017-kii ayay heshiiska ballaarinta dekadda Magaalada Boosaaso wada saxiixdeyn Xukuumaddii uu madaxweynaha ka ahaa Cabduweli Maxamed Cali Gaas & Shirkadda DP World.
Shirkadda DP Word ayaa lagu eedeeyey inaysan weli wax muuqda kusoo kordhin Dekadda Boosaaso marka laga reebo inay iska qaadato lacagta kasoo xarooto sida uu horey u sheegay Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi.
Wixii warar ah ee kusoo kordha mooshinka kala soco wararkeena soo socdo Inshaa Allah